ကခုန်ခြင်းကရတဲ့ ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူး ၁၀ ချက်
ကခုန်ခြင်းက ဝိတ်ကျစေဖို့၊ ကယ်လိုရီတွေ လောင်ကျွမ်းစေဖို့နဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖြစ်ဖို့ အကောင်းဆုံး နည်းလမ်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
ကခုန်ခြင်းဟာ ဝိတ်ကျနိုင်ရုံသာမက ကြွက်သားသန်မာမှုနဲ့ သက်လုံကောင်းစေမှုကို မြင့်တင်ပေးပြီး ကွေးဆန့်နိုင်အား၊ ဟန်ချက်ညီမှု၊ သွေးလည်ပတ်မှုနဲ့ ကောင်းကောင်း အိပ်ပျော်စေဖို့ အထောက်အကူပြုပါတယ်။ စိတ်ဖိစီးမှု၊ စိတ်ဓာတ်ကျရောဂါ၊ ဆီးချိုရောဂါ၊ နှလုံးရောဂါ စတဲ့ နာတာရှည်ရောဂါတွေ ဖြစ်ပွားမှုကိုလည်း လျှော့ချပေးပါတယ်။ .
ကခုန်ခြင်းက ဘယ်လောက်ကယ်လိုရီ လောင်ကျွမ်းနိုင်ပါသလဲ?
တခြားလေ့ကျင့်ခန်းတွေနည်းတူ လှုပ်ရှားမှု မြန်မြန်လုပ်လေ ကယ်လိုရီ ပိုလောင်ကျွမ်းလေဖြစ်ပြီး ဝိတ်ကျဖို့လည်း ပိုမိုမြန်ဆန်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မိနစ် ၃၀ အတွင်း လောင်ကျွမ်းနိုင်တဲ့ ကယ်လိုရီမျာ:
● ဘဲလေးအက - ၁၇၉ ကယ်လိုရီ
● အနောက်တိုင်းစုံတွဲအက - ၁၁၈ ကယ်လိုရီ
● Hip-hop အက - ၂၀၇ ကယ်လိုရီ
● Salsa အက - ၁၄၃ ကယ်လိုရီ
● Swing အက - ၂၀၇ ကယ်လိုရီ
● Country Western Line အက - ၁၇၂ ကယ်လိုရီ
● စည်းချက်အက - ၁၆၄ ကယ်လိုရီ
*မှတ်ချက် - ကယ်လိုရီလောင်ကျွမ်းမှုပမာဏသည် ကိုယ်အလေးချိန် (၆၈) ကီလိုဂရမ် ရှိသော လူတစ်ဦးပေါ် အခြေခံ၍ တွက်ချက်ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဖော်ပြပါ ကိုယ်အလေးချိန်ထက် နည်းသူများမှာ ကယ်လိုရီ လောင်ကျွမ်းမှုနှုန်း လျော့ကျနိုင်ပြီး အလေးချိန် များသူများမှာ ကယ်လိုရီလောင်ကျွမ်းနှုန်း ပိုမို မြန်ဆန်နိုင်ပါသည်။
မိနစ် (၃၀) ကခုန်ရတဲ့ သင်တန်းကနေ ကယ်လိုရီ (၁၃၀) မှ (၂၅၀) အထိလောင်ကျွမ်းနိုင်ပြီး ဖြေးဖြေးပြေးတဲ့ လှုပ်ရှားမှုကနေ လောင်ကျွမ်းနိုင်တဲ့ ကယ်လိုရီပမာဏနဲ့ အတူတူပဲ ဖြစ်ပါတယ်။.
နှစ်သက်ရာ အကအမျိုးအစားတွေကို အားကစားခန်းမအများစုမှာရှိတဲ့ အကသင်တန်းတွေ၊ သင်ကိုယ်တိုင် လေ့လာနိုင်တဲ့ အွန်လိုင်းအက ဗီဒီယိုတွေကနေ လေ့လာပြီး လိုက်ကနိုင်ပါတယ်။ လူကြိုက်များတဲ့ အက အမျိုးအစားတွေကို ရွေးချယ်နိုင်ဖို့ သူ့မှာရှိတဲ့ အားသာချက်၊ အားနည်းချက်တွေကို ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
Zumba အက ဆိုတာ ကျန်းမာကြံ့ခိုင်ရေး အကအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပြီး လက်တင် ဒါမှမဟုတ် နိုင်ငံတကာ သီချင်းတွေနဲ့ ကရတဲ့ အကမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအကဟာ လှုပ်ရှားမှုကို နှေးလိုက်၊ မြန်လိုက် အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲပြီး ကရတဲ့အတွက် တစ်ချိန်လုံး အရှိန်တစ်ခုထဲထားပြီး ကရတဲ့ အကတွေထက် ကယ်လိုရီ ပိုလောင်ကျွမ်းနိုင်ပါတယ်။ ဒီအကပုံစံက ခန္ဓာကိုယ်ကို ကျစ်လစ်စေပြီး ကြွက်သားတွေကိုလည်း သန်မာစေပါတယ်။ .
● လျင်မြန်စွာ ဝိတ်ကျစေခြင်း (၁ မိနစ်အတွင်း ၉.၅ ကယ်လိုရီ လောင်ကျွမ်းနိုင်)
● နာကျင်မှု ခံစားရခြင်း လျော့ကျစေနိုင်
● အသင်းအဖွဲ့နဲ့ လုပ်ရသော လေ့ကျင့်ခန်းဖြစ်သောကြောင့် လူမှုရေးအကျိုးကျေးဇူးများ ရရှိနိုင်
၂။ Hip-Hop အက
အမေရိကန်လူမည်းတွေ စတင်ခဲ့တဲ့ Hip-hop အကအမျိုးအစားကတော့ လှုပ်ရှားမှု ပြင်းထန်ပြီး အကျိုးသက်ရောက်မှုနှုန်း မြင့်မားပါတယ်။ Hip-hop ကကွက်တွေထဲမှာ break dancing လို့ခေါ်တဲ့ ကကွက်တွေကနေ ခေတ်ပေါ်ကကွက်တွေအထိ အမျိုးမျိုး ပါဝင်ပါတယ်။ .
● ကယ်လိုရီလောင်ကျွမ်းမှုနှုန်း မြင့်မားခြင်း
● သွက်လက်မှု၊ လှုပ်ရှားမှုကို ပိုမို ထိန်းချုပ်လာနိုင်
● ထပ်ခါတလဲလဲ ကရသော ကကွက်များတွင် အလွန်အားစိုက်ထုတ်ရသောကြောင့် ထိခိုက်မှု ဖြစ်နိုင်ခြေများခြင်း။ အက အစီအစဉ် တစ်ခုနှင့်တစ်ခုကြား မဖြစ်မနေ အနားယူရန် လိုအပ်ပါသည်။
ဘဲလေးအကဆိုတာ ဖြေးညင်းစွာ ကရတဲ့ အကဖြစ်ပေမဲ့ စနစ်တကျ လှုပ်ရှားရတဲ့ ကကွက်တွေ၊ နည်းစနစ်တွေကို အခြေခံထားတဲ့ ဂန္တဝင်အကအမျိုးအစား ဖြစ်ပါတယ်။ .
● ကြွက်သား ကျစ်လစ်မှုနှင့် သန်စွမ်းမှု မြင့်မားလာနိုင် (အထူးသဖြင့် ခြေ၊ လက်နှင့် ပင်မကျောရိုး)
● ခန္ဓာကိုယ် အနေအထား ပိုမို ကြည့်ကောင်းလာနိုင်
● ကွေးဆန့်နိုင်အား၊ သွက်လက်မှုနှင့် ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်းများကို စနစ်တကျ အသုံးပြုမှု ပိုမို ကောင်းမွန်လာနိုင်
တိုင်ပတ်အကဆိုတာ ခန္ဓာကိုယ်ကို တိုင်နဲ့ကပ်ပြီး ကွေးလိမ်တဲ့ အနေအထားနဲ့ ပုံဖော်ကရတဲ့ cardio လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ .
● ကွေးဆန့်နိုင်အားကို မြှင့်တင်ပေးခြင်း (အထူးသဖြင့် ခါး နှင့် ခြေ၊ လက်)
● ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ပိုင်း သန်မာမှုကို မြှင့်တင်ပေးခြင်း
● တိုင်ကို မြဲမြံစွာကိုင်ပြီး ခန္ဓာကိုယ် လိမ်၍လှည့်ရသော အကတစ်မျိုးဖြစ်သောကြောင့် လက်၊ လက်ကောက်ဝတ်၊ ပခုံး၊ ဒူး၊ ကျောရိုး ထိခိုက်ထားသူများနှင့် မကိုက်ညီပါ။
● ထိခိုက်ဒဏ်ရာ မရစေရန် အကနည်းပြဆရာနှင့် စနစ်တကျ လေ့ကျင့်သင်ကြားမှု လိုအပ်ခြင်း
စုံတွဲအကတွေဖြစ်တဲ့ Waltz ၊ Foxtrot ၊ Tango (တောင်အာဖရိက စည်းချက်အက) နဲ့ Salsa (တောင်အာဖရိက အက) တွေဟာ အကျိုးသက်ရောက်မှု နည်းပေမဲ့ အဆစ်အမြစ်ရောဂါရှိသူတွေအတွက် သင့်တော်တဲ့ အားကစားလှုပ်ရှားမှု အကအမျိုးအစား ဖြစ်ပါတယ်။ .
● ကြွက်သားသန်စွမ်းမှုကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်ခြင်း (ပင်မကျောရိုး၊ ခြေ၊ လက် နှင့် ခါး)
● ကွေးဆန့်နိုင်အားနှင့် ဟန်ချက်ထိန်းနိုင်ခြင်း ပိုမို ကောင်းမွန်နိုင်
● သိမြင်မှတ်သားနိုင်စွမ်း အားကောင်းနိုင်၊ ကကွက်များကို တစ်ဆင့်ချင်း မှတ်ရသောကြောင့် မှတ်ဉာဏ်အား ကောင်းမွန်လာခြင်း
ကခုန်ခြင်းဆိုတာ ပျော်စရာကောင်းတဲ့အပြင် ဝိတ်ကျဖို့ အထိရောက်ဆုံး နည်းလမ်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကကွက်အသစ်တွေ သင်ယူနေတဲ့ အချိန်မှာ ကိုယ့်ရဲ့ ဘေးကင်းကျန်းမာရေးကို သတိထားဖို့လည်း မမေ့ပါနဲ့။ အမြဲတမ်း :
● မကခုန်မီ သွေးပူလေ့ကျင့်ခန်းနဲ့ အကြောလျှော့တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ပါ
● ကနေတဲ့အချိန်နဲ့ ကပြီးတဲ့ အချိန်တွေမှာ ရေသောက်ပြီး ရေဓာတ်အမြဲ ဖြည့်ပါ
● ကိုယ်နေဟန်ထား မှန်ကန်၊ စနစ်ကျအောင် လေ့ကျင့်ပြီး ထိခိုက်မှု ဖြစ်နိုင်ခြေ နည်းအောင်လုပ်ပါ
● အနားယူတဲ့ နေ့ရက်သတ်မှတ်ပါ
● လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီးချိန် အကြောလျှော့ပါ
နာကျင်မှုခံစားရတယ်ဆိုရင် ဆက်ပြီး မကပါနဲ့တော့။ အကသင်ရတာ ခက်ခဲပေမဲ့ နာကျင်မှု ခံစားရတဲ့အထိ မလုပ်ဆောင်သင့်ပါဘူး။